Ultrasonic wave rudzi rwemagetsi wave iyo vibration frequency iri pamusoro kupfuura iyo yeruzha wave. Iyo inogadzirwa nekudengenyeka kwe transducer pasi pekunakidzwa kwemagetsi. Iyo ine hunhu hweakakwira frequency, ipfupi wavelength, diki diffraction chiitiko, kunyanya kutungamira kwakanaka, uye inogona kuve inotungamira yekuparadzira mwaranzi.
Ultrasonic inoparariraChishandiso inzira ine simba yekuparadzira iyo inogona kushandiswa murabhoritari bvunzo uye diki batch mangura kurapwa. Iyo inoiswa yakanangana mune yakasarudzika munda uye yakavhenekerwa neakakwira-simba ultrasonic.
Ultrasonic inoparadzira chiridzwa chinoumbwa neiyo ultrasonic vibration zvikamu, ultrasonic yekutyaira magetsi magetsi uye reaction kettle. Ultrasonic vibration zvikamu zvinonyanya kusanganisira yakakwira-simba ultrasonic transducer, runyanga uye chishandiso musoro (kutumira musoro), ayo anoshandiswa kugadzira iyo ultrasonic vibration uye inoburitsa iyo kinetic simba mune iyo mvura.
Iyo transducer inoshandura iyo yekuisa magetsi magetsi kuita echimakanika simba, kureva ultrasonic wave. Chiratidziro chayo ndechekuti iyo transducer inofamba ichidzika nekudzoka munzira yekureba, uye iyo amplitude inowanzo kuve mune mashoma ma microns. Yakadai amplitude simba kuwanda hakuna kukwana kuti ishandiswe yakanangana.
Runyanga runogona kukwidziridza iyo amplitude zvinoenderana nezvinodiwa dhizaini, tsaura mhinduro yekugadzirisa uye transducer, uye gadzirisa iyo yese ultrasonic vibration system. Musoro wechishandiso wakabatana nenyanga, iyo inopfuudza iyo ultrasonic simba vibration kune chishandiso musoro, uyezve iyo ultrasonic simba inopfuudzwa kune chemakemikari reaction mvura nemusoro wechishandiso.
Chenjedzo yekushandisa kweiyo ultrasonic inoparadzira chiridzwa:
1. Tangi remvura harigone kuiswa magetsi uye kushandiswa kakawanda kweinopfuura awa rimwe pasina kuwedzera mvura yakakwana.
2. Mushini unofanirwa kuiswa munzvimbo yakachena, yakati sandara kuti ushandise, goko harifanirwe kumwayiwa nemvura, kana paine, rinofanirwa kupukutwa rakachena chero nguva kuti risabonderane nezvinhu zvakaoma.
3. Magetsi emagetsi anofanirwa kunge achienderana neakaiswa pamushini.
4. Mukuita kwekushanda, kana iwe uchida kurega kushandisa, tinya bhatani rimwe chete switch.
Izvi zviri pamusoro ndizvo zvinounzwa kwauri naXiaobian nhasi, achitarisira kuti akubatsire kushandisa zvirinani chigadzirwa.